မာနလှိုင်း﻿လေး ငြိမ်းပါ﻿စေသား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » မာနလှိုင်း﻿လေး ငြိမ်းပါ﻿စေသား	4
Posted by ကာရံ on Dec 23, 2014 in Poetry |4comments
﻿ဝေခွဲမရ ﻿ကြွေကွဲညများ
မျက်﻿ရည်﻿စက်﻿များ ခါးသက်﻿လှပြီ . . .
ရင်﻿တွင်းမိုးတို့ တိုးခက်﻿﻿နေပြီ . . .
သင်﻿တို့ သင်﻿တို့ သိပါစ﻿လေ
﻿လောဘရမ္မက်﻿ ကြီးလှ﻿ပေစွ . . .
ဆုံးသည့်﻿တစ်﻿﻿နေ့ သင်﻿တို့ သင်﻿တို့
အနိုင်﻿ယူမြဲ ﻿နေပါ﻿လေစ . . .
ကာရံ ၂၄့ ၁၂့ ၂၀၁၄
မြစပဲရိုး says: အတ္တတွေ၊ လောဘတွေ နဲ့ လူတွေ ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှု ကို ငြိမ်ခံ နေတဲ့ ကိုယ့် အသုံးမကျမှု ကို ကိုယ် အံ့ဩနေမီတယ်။
တကယ်တော့ အရီး တို့ တွေ ရဲ့ လူထု မှာ လားရာ တူတဲ့ စည်းလုံးမှု မရှိဘဲ ရတဲ့ အရိုးအရင်းလေး ကိုက်နေတာဘဲ ကျေနပ်နေမိကြလို့ ထင်ရဲ့။
ခေါင်းစဉ် က ငြိမ်း သုံးချင်ရင် မီး ဖြစ်သင့်သလားလို့။
လှိုင်း ဆိုရင်တော့ ငြိမ် ပေါ့။ ဝတ်စပေါက်နှစ်လုံး ပိုသွားတာလား။
ကာရံ says: ဟုတ်﻿ဘူးအတိဘဲ
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: မာန လှိုင်းဆိုတာ
အဝိဇ္ဇာ လေ ထန်လို့. . . ထင်တာပဲ
ကာရံ says: ဟုတ်﻿ပ သူရ﻿ရေ